Hatsaraina hifanaraka amin'ny filàn'ny vahoaka ny fitsaboana eto Madagasikara | Primature
Hatsaraina hifanaraka amin’ny filàn’ny vahoaka ny fitsaboana eto Madagasikara
Mahazoarivo, faha 27 febroary 2020 – Nitohy tao amin’ny ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka ny fivoriana nifanankalozana ho fijerena vahaolana hanatsarana ny fomba fiasa eo anivon’ireo ministera izay niarahan’ny Praiminisitra, Ntsay Christian sy ireo tompon’andraikitra rehetra eo anivon’ity sampandraharaham-panjakana izay tarihin’ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka ity.
Nambaran’ny Praiminisitra ary fa “tsy mifanaraka amin’ny fanamby misy amin’izao fotoana izao ny hopitaly misy eto”. Noho izany dia tsy maintsy manangana fotodrafitrasa maro mifanaraka amin’izay filàna izay isika, na eto an-drenivohitra, na amin’ireo renivohi-paritany, eny fa na eny amin’ny Faritra, ny Distrika sy ny Kaomina aza hoy ny Praiminisitra. Havaozina sy hatsaraina ireo sampan-draharaha famonjena aina na “unités d’urgences” eny Befelatanana sy HJRA ho an’ny eto Antananarivo, ireo eny anivon’ny CHU amin’ny renivohi-paritany sy ny Faritra ary eny anivon’ny CHD izay tena mila izany. Ilaina ihany koa hoy hatrany izy ny manorina sy mampitombo isa ireo toeram-pitsaboana manome fitsaboana manokana toy ny “cardiologie”, ny “néphrologie”, ny “unité d’hémodialyse” sns, manerana ny Nosy, ary tsy ho ela dia hitsangana ny “centre de transplantation rénale” eto Madagasikara.
Mahakasika ny kalitaon’ny fitsaboana indray dia nilaza ny Praiminisitra fa “maro ireo malagasy no tsy mamonjy toeram-pitsaboana na hopitaly intsony noho ny avona sy ny kalitao ambany dia ambany eny anivon’ireo hopitalim-panjakana”. Hantenaina araka izany fa aorian’izao fivoriana izao dia hiova ny fomba fiasan’ireo tompon’andraikitra rehetra eo anivon’ny ministera ho amin’ny tsaratsara kokoa, ka hanova ny fijerin’ny olona ny fitsaboana omena eny anivon’ireo hopitalim-panjakana ary ho tena hopitaly manakaiky vahoaka sy hitondra soa hoan’ny Malagasy izy ireny.
Tsy ny hopitaly lehibe ihany no hametrahana izany fanovàna ny kalitaom-pitsaboana izany, fa ezahina ihany koa ny manatsara ny eny anivon’ireo CHD sy CSB. Misy araka izany ny fitadiavana izay vahaolana mahomby amin’ny fitantanana sy fitsinjarana ireo mpiasan’ny fahasalamana, indrindra ny amin’ireo toerana saro-dalana, tahaka ny fanorenana trano natokana ho an’ireo mpitsabo mba hahatamana azy ireo amin’ny toerana voatendry hiasany.
Nasian’ny Praiminisitra resaka ihany koa ny fanatsarana ny fitantanana ny raharaham-panjakana, ka nanamafisany fa “ny ady atao amin’ny tsolotra dia ady iombonan’ny firenena” ary tokony hiady amin’izany ny rehetra.
Nojerena ihany koa ny mahakasika ny tetibola, ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka dia isan’ireo mampiasa tetibola betsaka saingy noho ny olana eo amin’ny fitantanana dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fampiasana izany tetibola izany. Ho fanatsarana ny fitantanana ary dia misy lamina manokana napetraka eo anivon’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola mba hanamorana ny fampiasam-bola saingy mitaky fahakingana sy fandaminana matipaika avy amin’ny Ministera voakasika ihany koa.
← Fambolen-kazo faoben’ny Primatiora
Visite d’adieu et visite de courtoisie →